ထိပ်တန်းသီချင်းများ - ကင်းဘရစ်ချ်ကျောင်းသားတွေကိုသူတို့လေ့လာနေတဲ့ဂီတကဘာလဲ - CAMBRIDGE တက္ကသိုလ်ကိုမေးတယ် - သတင်း
ကျနော်တို့မဟုတ်ရင်ဟန်ဆောင်ချင်သလောက်, ကံမကောင်းတာကစာမေးပွဲများထောင့်လှည့်လည်ပုန်းအောင်းနေကြသည်ပုံရသည်။ ဤအချက်အရာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိန်းဘရစ်ခ်ျကျောင်းသားများအားသူတို့၏အကြံပြုချက်များအတွက်နမူနာမေးမြန်းခြင်းဖြင့်လေ့လာမှုပြုသည့်တေးဂီတကိုရှာဖွေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေအားလုံးကိုမေးနေပါတယ်။ Hercules တေးသံကသင့်ကိုဂန္ထ ၀ င်မှာပထမဆုံး ဦး ဆောင်မှာလား။ ဂန္ထဝင်တေးဂီတကလေ့လာမှုကိုတကယ်အထောက်အကူပြုမလား။ ထိုအခါမှောင်မိုက်ပညာရှင် playlist သင်၏အသက်တာကိုအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်နည်း
သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူခန်းမရှိပထမနှစ်ကျောင်းသားတစ် ဦး ကစကားများကိုအာရုံပျံ့လွင့်သွားသောအခါသူမလေ့လာချိန်၌ဂန္ထဝင်တေးဂီတကိုသူကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ဒါကြောင့် Nils Frahm မှ Chopin အထိသူမရဲ့စာရင်းတွင်ပါရှိသည်။ ပိုပြီးတိကျတဲ့အရာတစ်ခုခုလိုအပ်လား။ သူမကသူမသည်အထူးသဖြင့်သံစုံတီးဝိုင်းတွင်တီးမှုတ်ခြင်းနှင့်ရံဖန်ရံခါရုပ်ရှင်ရမှတ်များ၊
Vibes: 9/10 Bridgerton ရဲ့ဂန္ထဝင် Bangers? ငါ့အပေါ်မှာဘာမှမရဘူး
လေ့လာမှု - သွေးဆောင်ရမှတ်: 10/10 ။ အရင်တုန်းကဂန္ထဝင်ဂီတကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ဖူးတယ်၊ ၎င်းသည်အာရုံမထွေပြားစေဘဲကျွန်ုပ်၏လေ့လာမှုပုံစံသို့ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ဒါဟာတကယ့်ကိုညဥ့်နက်လှတဲ့ကခုန်မှုအတွက်ရှုပ်ထွေးလှတဲ့လှေကားထစ်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့မင်းသမီးလိုခံစားမိစေတယ်။
တ ဦး တည်း ဦး တည်ချက်ရဲ့အသားတင်ရကျိုးနပ်ကဘာလဲ
ကျွန်ုပ်၏ရှိတ်စပီးယား၏ရုပ်ထုသည် Bridgerton မှ Duke ဖြစ်သည်ဟုဟန်ဆောင်သည် *
NatSci မှကျောင်းသားတစ် ဦး ကသူမသည်သူမအတွက်ဂီတကိုအမှန်ရွေးချယ်ရန်မရွေးချယ်ကြောင်း၊ သူမလက်ချောင်းများကိုသူမနားရွက်များတွင်ထားသည့်သီချင်းများရှိနေသေးသည်ဟုပြောခဲ့သည်။
Billy Joel, Bruce Springsteen နှင့် Beatles တို့မှသူမကြိုက်နှစ်သက်သည့်တီးလုံးတီးလုံးအချို့ရှိသော်လည်း၎င်းတို့ကိုလေ့လာရန်လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်အသုံးမပြုပါ။ တကယ်တော့ဂီတကိုလေ့လာတာကသူမကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်။
Vibes: 6/10 ။ အဆိုပါတိတ်ဆိတ်နားမကြားဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာမှု - သွေးဆောင်ရမှတ်: 9/10 ။ ငါနောက်ခံဆူညံသံအနည်းငယ်ကြိုက်သော်လည်း, ဤနည်းလမ်းကိုငါ့ကိုအောင်မြင်စွာအာရုံစူးစိုက်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ ငါဇုန်အတွက်အလွန်ခံစားရတယ်။ တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်ကကျွန်တော့်ကိုတေးဂီတမပါဘဲနဲ့စူးအက်တူးမြောင်းလှေကိုဘယ်လိုလွှတ်ပေးရမယ်ဆိုတာတွက်ဖို့အချိန်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေရာတွေလုံလုံလောက်လောက်ရှိဖို့ငါ့ ဦး နှောက်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
ရော်ဘင်ဆင်အိန်ဂျယ်လ်ကသူမသည်ဂန္ထဝင်ဂီတ (အဓိကအားဖြင့် Bach) ကိုနားထောင်ခြင်းနှင့် YouTube ပေါ်တွင်ဖွင့်စရာစာရင်းများကိုလေ့လာခြင်းကိုနှစ်သက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူမက Taylor Swift အယ်လ်ဘမ်ကိုလေ့လာရတာကိုကြိုက်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ် ချစ်သူ ။ ဖြစ်ကောင်းဤအမျိုးအစားရောနှောရှေ့ဆက်လမ်းပါ!
Vibes: 10/10 တေလာဆွစ်ဖ်၏ကုန်သွယ်မှုအားလုံးပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည်သူမအပေါ်ကျွန်ုပ်၏မေတ္တာကိုဖော်ပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လေ့လာမှုစွမ်းရည် - ၇/၁၀ ။ ဟုတ်ပါတယ်, ဂန္ထဝင်ဂီတကိုအလွန်အဆင့်မြင့်စွာသတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကျွန်ုပ်နားထောင်လိုသည်ကိုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည် ချစ်သူ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အာရုံစူးစိုက်လေ့လာခြင်းပူဖောင်း၌လုံးလုံးလျားလျားနေစရာမလိုပါက - အလုပ်လုပ်ရန်ကြိုးစားနေစဉ်၊ ကျွန်ုပ်သည်တေလာပုံစံကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ၃၅ ယောက်အားကျွန်ုပ်၏အိပ်ခန်းနံရံများသို့တက်ရန်အကြိမ်ကြိမ်တိုက်လှန်ခဲ့ရသည်။
T Swizzle သည်အမြဲတမ်းကျွန်ုပ်၏လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်ငါတို့သွား! စာမေးပွဲများအတွက် ဦး ဆောင်ရန်တေးဂီတလှုံ့ဆော်မှု။ မင်းရဲ့ Fort ဟာအခုတော့မမြင်ရတဲ့တယောတစ်မျိုးကစားနေသည်ဖြစ်စေပဲ King's Parade တွင်သင်၏ဖျော်ဖြေမှုကိုအတူတူဝတ်ဆင်သည့်အခါ Beyonce နှင့်သင်အငြင်းပွားခဲ့ရသည်။ ရပါတယ်။ သင် Beyonce နှင့်အတူအမှုအရာကျော်ချောမွေ့သောအခါငါ့ကိုမေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။
ပုံရိပ်ခရက်ဒစ်နှင့်ပုံခရက်ဒစ်အားလုံးပါ ၀ င်သည်။ ချာလီဖြစ်သူ Scott-Haynes ။
•ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Knickers နှင့် Gnomes တို့သည်ဖြစ်ရပ်မှန်တွင်ရှိသည်
•မင်းရဲ့ supo essay နောက်ဆုံးနေ့ကိုလက်လွှတ်ဖို့အကြောင်းလား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်ပို ၀ ယ်ရန်အရူးမရှိသောနည်းလမ်း ၇ ခုရှိသည်
•သော့ခတ်ပြဇာတ်ရုံအဘို့အလိုင်းသင်ယူမှုမှတစ် ဦး ကကင်းဘရစ်ကျောင်းသားရဲ့လမ်းညွှန်